Australia iyo New Zealand waxay bilaabaan Apple Black Friday waxaana jira qiimo dhimis Macs | Waxaan ka socdaa mac
Maaddaama sannad walba kuwa ugu horreeya ee hela qiimo dhimista Jimcaha ay yihiin latitude, Australia iyo New Zealand, sida markay tahay Sannadka Cusub. Xaaladdan laakiin waxay u adeegtaa tixraac ahaan waxay leeyihiin bogga Apple ee Australia qiimo jaban si aad u ogaato dalabyada suurtagalka ah ee Apple ay ka samayn doonto adduunka intiisa kale.
Iyada oo ay taasi jirto, ma dhihi karno in dalabyadu ay isku mid ka yihiin waddammada oo dhan, laakiin waxaan fikrad yar ka haysan karnaa waxa Apple ay na siin doonto saacado yar gudahood. Kiiska Macs waa midka noogu muhiimsan iyo kiiskan Apple waxay ku siisaa Australia hadiyad ka kooban 210 doolar si loogu iibsado qaar ka mid ah Mac-yada, taasina waa tan ugu badan ee ay soo bandhigi doonaan, iyaga oo ka tagaya Mac mini dalabkan.
Marka iibsiga Mac Apple wuxuu nagu abaalmarin doonaa kaarka hadiyadaha ah 210 doolar marka laga hadlayo Apple Watch waxaan ka heli doonnaa kaarka hadiyadaha oo ah 35 doollar laakiin moodooyinka qaar sida Taxanaha 1, inta kale wey ka maqan yihiin dalacaad Australia iyo New Zealand.
Kuwa doonaya inay ogaadaan waxyaabaha lagu bixiyo iPhone-ka, waxaad dhahdaa sida iska cad iPhone-ka cusub ee iPhone 8, iPhone 8 Plus iyo iPhone X, ayaa laga reebay dalacsiinta Australia iyo suuragalnimada adduunka oo dhan. Tani waa wax marwalba dhaca oo aan mar dambe nagu soo noqon. Waa inaan sugnaa dhowr saacadood oo dheeri ah illaa iyo inta Jimcaha Madoobaad si rasmi ah uga soo degayso dalkeenna tan iyo markii ay suurtagal tahay in dalabyadan ay is beddelaan. Waxa u muuqda inay cadahay waa in Mac mini, iPad Pro cusub (labadaba 10 iyo 12 inji), Apple TV iyo Apple Watch Series 3 kuma jiri doono dalabyadan. Saacado yar gudahood, Jimcaha Madow wuxuu si rasmi ah u imaan doonaa Mareykanka, Kanada iyo Yurub, waan arki doonaa dalabyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Australia iyo New Zealand waxay bilaabaan Apple Black Friday waxaana jira qiimo dhimis Macs ah
Apple waxay sii wadaa inay horumariso softiweerka gawaarida iswada